जनै लगाउनै पर्छ होला त ! किन ? « Tulsipur Khabar
ज्योतिषी माधवा शर्मा पाण्डे, तुलसीपुर दाङ । मानिसको जन्म हुदा अबोध हुन्छ । जव हुर्कदै जान्छ उसलाई विभिन्न मूल्य– मान्यता र संस्कार सिकाउँदै सामाजिक प्राणी बनाइन्छ । धर्म, साँस्कृतिको बोध, सामाजिक मूल्यमान्यताको बोधगराउदै असल मार्गको यात्री बनाइन्छ । जन्मपश्चात् मृत्यपर्यन्त मानिस साँच्चिकै हिन्दुधर्मावलम्बीमा बिशेषत संस्कारकै नियन्त्रणमा हुन्छ तपाई मान्नुस् या नमान्नुस् । हिन्दुहरुका सोह्र संस्कार छन् ती मध्ये ब्रतबन्ध प्रमुख एक हो । परापूर्वकालमा ब्रतबन्ध पश्चात जनै धारण गर्ने, अध्ययन, धार्मिक, व्यवहारिक अधिकार प्राप्त हुन्थे । ब्रतबन्धलाई अर्को शब्दमा उपनयन पनि भनिन्छ । उप+नयन मिलेर यो शब्द निर्माण भएको छ । अर्थ रहन्छ असल मार्गमा लैजानु हुन्छ । ब्रतबन्धपश्चात मानिसको दोस्रो जन्म भएको मान्ने संस्कार पनि हामीकहा रहेको छ किनकी जनै धारणगरे पश्चात मात्र विभिन्न धार्मिक कार्य को लागि मानिसले अधिकार प्राप्त गर्दछ ।
आकार्य परपुज्यैताँस्तदाज्ञावशत्रो हर ।यथाविधि चकारास्य ब्रतबन्ध मुदातदा ।।उपायनानि सर्बे ते शिवयोर्बालकस्य च ।अष्टाशीतिसहस्रेभ्यो नमस्कृत्य हरोडयि च ।।गणेश पुराण ९६÷५–६सत्ययुगमा सम्पुर्ण ऋषिमुनिहरुलाई निमन्त्रणा गरी गणेशजीको ब्रतबन्ध गरियो । स्कन्दपुराण केदारखण्डको माधमहात्म्य अन्तर्गत गोमाले आफ्ना पति भिक्षामाग्न गएका नफर्केपछि अरुको सहायता लिई ब्रतबन्ध गरिएको कथा उल्लेख छ । भगवान रामको घाँटीमा पनी पीत जम्य उपवीत सुहाये अर्थात पहेलो जनै चम्कीएको कथा रामचरितमानसको कथामा उल्लेख छ । ब्रतबन्धको अर्थ, कामवाद, कामभक्ष, कामाचार छाडी नियममा बाधिनु पनि हो ।गर्भाष्टमेडब्दे कुर्वित ब्राहमणस्योपनायनम ।
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्धादशे विश ।। मनुस्मृतिहिन्दुधर्ममते, अष्ट वसु, (८) एघार रुद्र, ब्राह अदित्य इन्द्र र प्रजापती गरी ३३ देवता मानेको छ ।ब्राहमणलाई गरी आठ वर्षमा मतलब वसु आठवटा छन्, वसु ब्राहमण जाती थिए, रुद्रलाई क्षेत्री, क्षेत्रीले ११ वर्ष, अ. सूर्य बाह्र वटा क्षेत्रीलाई १२ वर्षमा यसरी छुट्याएर ब्रतबन्ध गराइन्छ ।ज्योतिषशास्त्र अनुसार प्रत्येक माहिनाका अधिपती फरकहुन्छन् । ब्रहमण–बसन्त ऋृतु, (स्वामि अनुसार)जनै हरेक विधि पु¥याएर निर्माण गरिन्छ यसैले पनि यसलाई अटुट रुपमा धारण गर्नु पर्दछ । अहिले र पहिलेको समय उस्तै हो । तापनी मानिसका क्रियाकलाप आचरण ले गर्दा हरेक कृयाकर्मा मोटाउदै गैराखेका छन् ।
पहिला षट्शास्त्रको ज्ञान (व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त, शिक्षा) प्रत्येक मनुष्यले गर्नु पर्दथ्यो , यसकै आधारमा ६ डोरे जनै लगाउने चलन को शुरुवात गरियो । अर्को ओमकार, अग्नि, नाग, चन्द्रमा, पितृगण, प्रजापती वायु, सुर्य एवं सर्वदेव गरी नौ देवको प्रतिकका रुपमा ९ डोरे जनैको शुरुवात भयो । अव यो जनैलाई विधिविधानले पुजागरी पवित्र बनाइन्छ । मान्छेले दिनमा २१ हजार भन्दा बढी पटक श्वास फेर्दछ । यसैलाई अंगुल लामो डोरालाई शास्त्रीय नियम पूर्ण गरी जनै निर्माण गरिन्छ । वास्तवमा जनै धारण गरीसके पश्चात अझै वैज्ञानिक र गहिरा प्रभाव भेटेकी छु । मैले जस्तै दिशापिसाब गर्दा दाहिने कानमा जनै वेर्ने चलन छ धार्मिक पार्टले हेर्दा दाहिने कानमा वायु, चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्र, वरुण आदिदेवता बस्दछन् । उनको साथमा हुँदा पवित्र रहन्छ भन्ने धारणा छ ।
वैज्ञानिक धारले हेर्दा कानमा जनै राख्दै अक्कुपेन्चरको काम गर्छ कानको नशाको कनेक्सन मुटु र पेटको अग्निसंग हुन्छ, ट्वाइलेटमा बस्दा रिंगटा या हर्टट्याक वाट बचाउउन यसले ठुलो सहायता गर्दछ । साथै ट्वाइलेट पनि सजिलै किलियर हुने कुरा विज्ञानले चर्चा गरेको छ । जनै जस्तै विधिले पुजाअर्चना गरेर रक्षाबन्धन लगाउने चलन पनि छ । अर्थात् रक्षाबन्धन लगाउने विशेषगरी पाठेघरको समस्या भएका महिलाहरुलाई विशेष लाभ हुन्छ । सर्वरोगो पशमन सर्वाशुभविनाशनम् ।सकृत्कृतेनाब्दमेंक ष्ेन रक्षा कृता अवेत् ।।मन्त्रमा अधिक शक्ति छ उसको विधा पुरागरेमा धेरै कार्यमा कवचको काम गर्दछ । यस्तै रक्षाबन्धनलाई मन्त्रित गरी धारण गर्दा विभिन्न बाह्य नकारात्मक तत्व या इनर्जिबाट बच्न सकिन्छ । दाहिने हातमा धेरै चुरा लगाउनु भन्नेको अर्थ पनि यहि हो कुनै पनी स्त्री विहे पश्चात् विरर्य या पाठेघरको समस्याबाट गुज्रिन नपरोस । समयको अन्तराल संगै विकृति धेरै फैलिएको छ ।
कम्न्युष्ट भन्ने अध्ययनको कमि भएका हरुले पुराना वैज्ञानिक (ऋषिमुनिले) भनेका कुरालाई अनुसन्धान नगरी आधुनिक विज्ञान र पश्चिमीको पछी दगुरी आफ्ना सबै मुलहरुलाई सुकाउदै छन् । तर पश्चीमीहरु ीय तत्वलाई खुव अनुसन्धान गरीराखेका छन् । हामिले भन्दा उनिहरुले नियमलाई मान्ने मोर्डन हामी धेरै पछी परेका छौ । हामिले हाम्रा वैज्ञानिकलाई उनले अविष्कार गरेका तत्वलाई भित्रि आखाले होइन बाहीरी आवरणले हेरीराखेका छौँ । त्यसैले साँच्चै हामी धेरै पछाडी परेका छौँ । विभिन्न संस्कारमा विभिन्न वैज्ञानिकता लेकेको छ ।
साच्चै भन्ने हो भने यही संस्कार भेटाउदै जनदेशमा दिन प्रतिदिन घटना दुर्घटना बढ्दै गैराखेका छन् । अत एवं संस्कार पनि जोगाउन पर्छछ । साथै अनुसन्धान पनि गर्नपर्छ । अन्नतमा रक्षाबन्धन एवं जनैले मानिसलाई सजिलो अर्थमा भन्ने हो भने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंहकार लगायतका विकारबाट बचाएर आनद्य र मुक्तिको ढोका खुलाइदिन्छ । त्यसैले जनै (यज्ञेपवित) र रक्षाबन्धनको सम्बन्ध असल, सकारात्मक, प्रगतिशील एवं संस्कारयूक्त जीवनसंग गाँसिएको हुनाले धारण गर्न अपरिहार्य रहेको छ ।
स्यानी चौधरीले चुनाव जित्ने आधार
शिक्षाले बदलेका सपनाहरु